Olu suku olutsha kwi-UNWTO linyathelo elikhulu lokuHamba, uKhenketho, kunye noQoqosho lweHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » I-WTN » Olu suku olutsha kwi-UNWTO linyathelo elikhulu lokuHamba, uKhenketho, kunye noQoqosho lweHlabathi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • iindaba • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
Disemba 2, 2021
by UJuergen T Steinmetz
Yongeza i ngxelo
4 imiz efundwayo
Ibhalwe ngu UJuergen T Steinmetz
Namhlanje, ikamva leWorld Tourism Organisation (UNWTO) lijongeka liqaqambile. UZurab Pololikashvili waseGeorgia waphinda waqinisekiswa njengoNobhala Jikelele kunyulo oluyimfihlo ekungekho mntu uya kukwazi ukubuza ngalo. Oku kukuphumelela / ukuphumelela kwabaninzi. Nasi isizathu.
Namhlanje, amazwe angama-85 avotele uNobhala-Jikelele we-UNWTO UZurab Pololikashvili uya kuqinisekiswa ukuba ukhokele Umbutho wezoKhenketho kwiHlabathi liphela eminye iminyaka emi-4.
Namhlanje ikwalusuku apho kungekho lizwe, kungekho mthunywa, kwaye kungekho mntu wangaphakathi uya kukwazi ukubuza le ngxoxo yoqinisekiso kuba ibinobulungisa, iyimfihlo, kwaye ilawulwa ngokwentando yesininzi. Ngamazwe angama-29 kuphela avotele ngokuchasene nokuqinisekiswa kwakhona.
Oku kwakungekona nje ukuphumelela kukaMnu Zurab Pololikashvili kodwa kunye ne-arhente edibeneyo ye-UN, ukwenzela Iphulo leWTN kuNyulo”, kunye nababini ababenguNobhala Jikelele we-UNWTO - uDkt. Taleb Rifai kunye noFrancesco Frangialli - ababevule ngokuvulekileyo iintsimbi ze-alarm ngokubuza inkqubo yokhetho olunobulungisa kwi-arhente efanayo ababeyisebenzele iminyaka emininzi.
Mr. I-Pololikashvili iphumelele unyulo, kwaye kwavela iqhawe.
Iqhawe kunyulo lwanamhlanje ibinguMhlonishwa. UGustav Segura Costa Sancho, uMphathiswa wezoKhenketho waseCosta Rica, wenze unyulo olunobulungisa. Egameni laseCosta Rica, wacela ivoti eyimfihlo efunekayo ukuze aqinisekise kwaye atywine nasiphi na isiphumo ebesinokubakho kwinkqubo yanamhlanje. Ngaphandle konyulo oluyimfihlo, ilifu elimnyama lokukhohlisa laliza kuhlala kule nkqubo kwiminyaka emine ezayo.
Nakuphi na ukurhanelwa kobuqhophololo ngoku kuye kwakhukuliswa. UNobhala-Jikelele kwithuba lakhe lesibini unokugxila ngokupheleleyo kukhenketho olukhokelayo kuwo onke amazwe angamalungu.
Akayi kuba nesibophelelo esikhethekileyo kumazwe akwibhunga lesigqeba. Akusayi kubakho olunye unyulo. Isikhundla sakhe ngoku sikhuselekile yaye sitywiniwe de kuphele ixesha lakhe lesibini. Ngoku unokugxila ekukhokeleni ukhenketho lwehlabathi ngemingeni emikhulu eli candelo lijongene nayo.
Olu luloyiso lokhenketho lwehlabathi ngokubanzi.
Iya kunceda noNobhala-Jikelele ukuba akhe ilifa lakhe. Amahemuhemu kukuba isicwangciso sakhe kukuqhuba iNkulumbuso yaseGeorgia emva kokuba ixesha lakhe le-UNWTO liphelile.
Ke namhlanje ibilusuku lokuphumelela/lokuphumelela/lokuphumelela kukhenketho lwehlabathi. Ngoku kufanelekile ukuvuyisana noMnu Zurab Pololikashvili ngokuphumelela ukhetho olunobulungisa noluyimfihlo, kodwa lixesha lokuba wonke umntu okhenketho lwehlabathi asebenze ne-UNWTO.
Kwilizwe labaphumeleleyo, kukwakho nelizwe labo benza izibophelelo ezingento. Ubuncinci amazwe angama-35 aye aqinisekisa ukuba enze into enye, agqibe ekubeni enze okwahlukileyo. Mhlawumbi oku kungabizwa ngokuba "izopolitiko," kwaye ezopolitiko ngelishwa ZIhlala zisekelwe kumsi kunye nezithembiso ezingenanto. Oku akubonakali kwahluka kumacandelo amaninzi, kumazwe, okanye kumanyano.
UJurgen Steinmetz we eTurboNews, kunye nesitulo se Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi, Ndivakalelwa kukuba umthwalo omkhulu ususiwe kwicandelo lezokhenketho namhlanje. Lixesha lokuba sibeke iyantlukwano kunye nokugxeka emva kwethu kwaye sincede i-UNWTO ihlale isendleleni yokulungelwa kokhenketho lwehlabathi.
Umnumzana Pololikashvili uthe: “Kuwo wonke ummandla wehlabathi, lo bhubhani wenze kwacaca ukubaluleka kwecandelo lethu – kuhlumo loqoqosho, kwimisebenzi nakurhwebo, nokukhusela ilifa lendalo nenkcubeko. Kufuneka silisebenzise kangangoko eli thuba-ukuguqula inkoliseko ibe yinkxaso ebambekayo. "
USteinmetz wavuma kwaye wanikela UMnu Zurab Pololikashvili kunye ne-UNWTO inkxaso yakhe epheleleyo kunye nentsebenziswano.
“Kumazwe amaninzi axhomekeke kukhenketho, ukuba nelizwi elimanyeneyo lehlabathi, kunye nemisebenzi elungelelanisiweyo inokuba linyathelo elikhulu eliya phambili kuqoqosho olunjalo”, uvale ngelo uSteinmetz.
UJuergen T Steinmetz
UJuergen Thomas Steinmetz uqhubekile esebenza kwishishini lokuhamba nokhenketho okoko wafikisa eJamani (1977).
Uye waseka eTurboNews ngo-1999 njengephepha leendaba lokuqala kwi-intanethi kushishino lokhenketho lwehlabathi.
Shiya Comment X
Izithuthi zabakhweli kwiSikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt ziBuyela kwakhona ngokuphawulekayo kwisiqingatha sokugqibela soNyaka January 17, 2022
IZanzibar Ivula Iingcango Ezingakumbi kuTyalo-mali loKhenketho January 17, 2022
Uhlaselo lweSinagoge yaseTexas engaqhelekanga: Zonke iimbono zezam ngokungqongqo January 17, 2022
UKhenketho lwaseMexico i-SKAL Way: Ubuhlobo, i-Toast ekhethekileyo, kunye neenkwenkwezi kwi-AGM January 16, 2022
Iiwayini zaseSpain: Ngcamla Umahluko Ngoku January 15, 2022
Hawaii, Alaska, US West Coast ngoku phantsi Tsunami Advisory emva Tonga volcanic Eruption January 15, 2022
Bonke abasebenzi abangagonywanga ngoku bavaliwe kwiindawo zokusebenza eSingapore January 15, 2022
Entsha Norway/EU ukuya US iinqwelo moya kwi Norse Atlantic Airways January 15, 2022
Umzila wesithathu wokuhamba ngenqanawa utyikitya isivumelwano esitsha sezibuko kunye neHawaii January 15, 2022
Uvavanyo olutsha lweklinikhi lwe-Opioid Use Disorder January 15, 2022
IiNdlela ezi-6 eziPhezulu zeTekhnoloji yokhathalelo lwempilo ngo-2022 January 15, 2022
Indlela Izithintelo ze-COVID Ngoku ezibachaphazela ngayo abantwana January 15, 2022
Uphononongo olutsha kwiZiphumo zokuKhulelwa kwe-COVID-19 January 15, 2022
Uphononongo olutsha lubonisa ukuFudukela emaphandleni ukuya ezidolophini kunokukhokelela ekutyebeni January 15, 2022
Uphononongo olutsha lufumana ukusweleka koMhlaza wamabele kwihlabathi lonke kwanda January 15, 2022
Iindlela zokuHamba zaseIndiya njengoko zibonwa ngabadlali abaphambili boShishino January 15, 2022
IHong Kong ngoku iyabavala abahambi abasuka kumazwe ali-150 January 15, 2022
I-EU ithi imigaqo yayo ayinyanzeli iinqwelomoya ukuba zenze iinqwelomoya 'zesiporho' January 14, 2022
I-Netherlands yenza lula izithintelo ze-COVID-19 nanjengoko usulelo olutsha lusanda January 14, 2022
AbaSebenzi boKhenketho baseIndiya baCela uNcedo ngoku ngeNgxaki yezeMali January 14, 2022
Umnyhadala waseIndiya utsala abantu abayi-3,000,000 ngaphandle koqhaqho olutsha lwe-COVID-19 January 14, 2022
Iinqwelomoya ezintsha zaseChisinau zisuka kwisikhululo seenqwelomoya saseBudapest kwiWizz Air January 14, 2022
Umtsalane wabakhenkethi wase-US onemirhumo ebiza kakhulu yokupaka January 14, 2022
Amazwe ahlwempuzekileyo ayala ugonyo lwasimahla lwe-COVID-19 olunikezelwa yi-UN January 14, 2022
Indlela eya kwi-Super Bowl ngoku ifakwe kunye neFritos January 14, 2022
Inani elizinzileyo lokufa kwe-COVID eliphawulwe njengeNto eLungileyo January 14, 2022
Iimaski ze-N95 ziSicebiso esitsha sokuKhusela kwi-COVID January 14, 2022
Ingxelo eNtsha iqikelela i-100,000 yemisebenzi emitsha yeCannabis ngo-2022 January 14, 2022
Unyango olutsha lungaLibazisa ukuQhubela phambili kweSifo se-Alzheimer January 14, 2022
I-NASA ibonelela ngokuBamba ngokuPhila kweRussian Cosmonauts Spacewalk January 14, 2022
IPhepha eliNtsha leNgcaciso yoMgaqo-nkqubo kuBuqhetseba obuNxulumene ne-COVID-19, iNkunkuma, kunye nokuxhatshazwa January 14, 2022
INkundla ePhakamileyo yase-US iXhobisa iSigunyaziso sokugonya kuMsebenzi woNonophelo lwezeMpilo January 14, 2022
Imiqondiso emi-6 Umtshato Wakho Unokuba Sengxakini January 14, 2022
Ukonakaliswa kweeSeli zeNgqondo kuPhezulu kwizigulana ze-COVID-19 kuneZigulana ze-Alzheimer January 14, 2022
Ithemba elitsha kwabo banesifo sengqondo esixhalabisayo January 14, 2022
Isiseko seeSandali: Ukwenza umahluko omkhulu eBahamas January 14, 2022
I-CEO yeDelta: Ngama-8,000 abasebenzi beenqwelomoya abavavanywe ukuba banayo i-COVID-19 January 14, 2022
INorwegian Cruise Line ityhila iViva entsha yaseNorway January 14, 2022
Ukhenketho lweCaribbean luhlala lunethemba lokuphinda lubuyele ngaphandle kwe-Omicron snag entsha January 14, 2022
Ukubhukisha iinqwelomoya eSingapore kuye kwafikelela esiphelweni seeVTL January 13, 2022